Fanaanada Shiriihan Maxamed Cabdulle oo ruxday masraxyada Yurub ‘Hadaba Waatuma Shiriihan? Halkaan Kaga Bogo’ | Baahin Media
May 1, 2019 - jawaab
Fanaanada Shiriihan Maxamed Cabdulle, waxay ku dhalatay magaalada Oslo ee dalka Norway, sanadkii 1991-gii balse waxay caan ku tahay magaca Cherrie.
Shiriihan ayaa ku soo barbaartay dalka Finland halkaas oo ay qoyskeeda yimaadeen kadib markii ay ka soo qaxeen dalka Soomaaliya.
Iyadoo 10 jir ah ayey iyada, walaalkeed iyo hooyadeed u soo guureen degmada Rinkeby ee magaalada Stockholm ee inta badan ay muhaajiriinta ku nool yihiin.
Shiriihan oo Cherrie loo yaqaano ayaa aad caan uga ah wadamada Scandinavian-ka, waxayna madax u tahay koox heesayaal ah oo ku luuqeeya heesaha Raapka ah.
Cherrie ayaa mar ay BBC-da la hadleysay waxay sheegatay in horumarkeeda ay ka dambeyeen Soomaalida qurba joogta ah.
”Marka heesahayga ay baraha bulshada qabsadeen, wixii kaalin muhiim ah ka qaatay waxay ahayeen soomaalida qurbaha” ayey tiri Shiriihan Maxamed Cabdulle.
Cherrie ayaa isa saartay mas’uuliyad ah inay afhayeen u noqoto goobta ay deggan tahay ee Rinkeby, iyadoo soo gudbin jirtay caqabadaha ay dadka degaankaasi la kulmaan oo ay ka mid yihin qoysaska dad ay jeclaayeen laga toogtay.
Ibo Njie oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada, degganna degaanka Rinkeby ayaa fanaanadan soomaaliyeed ku tilmaamay geesiyad wuxuuna ka waramay waagii ay ku cusbeyd degaanka Rinkeby ee ay yareyd.
”Waxay ahayd gabar yar oo farxad badan oo aad kuu soo jiidaneysa, waxaadna ka dareemeysay iney meel fog tiigsaneyso oo ay mar un waxa ay dooneyso ay hoggaanka u qabaneyso.Carruurta yaryar ee aan halkan ku hayno laftooda marka ay iyada oo kale arkaan waxay iyaguna ku fakarayaan sidi ay iyaguna hal abuur ula iman lahaayeen, inta aan noolahayna Sheeria qalbigeyga kama baxeyso waa gabar aad u wanaagsan” ayuu yiri Ibo Njie.
Inkastoo ay ku dhalatay, kuna barbaartay qurbaha, misna waxay aad u jeclaan lahayd inay aragto dalka ay asal ahaan ka soo jeeddo ee Soomaaliya.
”Waalidiinta Soomaalida ee qurabaha jooga runtii kuma faraxsana inay badankood halkan joogaan, waxaana leenahay dal dhan oo aan jecel nahay balse uu dagaal ka socdo, waalidiinteena waxay arkaan isagoo nabad ah, siduu u wanagsanaa una qurux badanaa, balse waxaan u maleynayaa inay ku faraxsan yihiin fursadaha ay ilmahooda halkan ka helayaan” ayey tiri Cherrie mar ay BBC-da la hadleysay.
Iyadoo farxad iyo kalsooni ay ka muuqato wajigeeda ayey ka warrantay sida soomaalida ay meel walboo ay tagaan ay saamayn ugu yeeshaan.
”Waxaan nahay dad ad-adag oo u dulqaadan kara wax walbo, waana taas darteed waxaad inta badan u arkeysid kalkaaliyayaal tiro badan oo soomaali ah oo cisbitaalada ka shaqeeya, runtii soomaalida waxyaabo badan ayey qabtaan, waxa jiro kuwa aniga ila mid ah oo heesa, waxyaabo badan oo halkan ku cusub ayaan keennay” ayey tiri.
Dad badan ayaa aaminsan in Marka aad eegto shaqsiyaad ay ka mid yihiin orodyahanka caanka ah ee Mo Farah, Ilhan cumar oo xubin ka ah congreska Mareykanka iyo wasiirka arimaha socdaalka ee dalka Canada Axmed Xuseen iyo soomaalida ee kale ee saamaynta ay ku yeesheen waddamada qurbaha ah ee ay joogaan, in soomaalidu ay tahay qowmiyad meshay tagtaba ka muuqata.